एमाले पहिचान विरोधी हो भन्ने कुरा जनताको घरघर गएर भन्नुपर्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » एमाले पहिचान विरोधी हो भन्ने कुरा जनताको घरघर गएर भन्नुपर्छ
एमाले पहिचान विरोधी हो भन्ने कुरा जनताको घरघर गएर भन्नुपर्छ
SAHARA TIMES Monday, January 9, 20170No comments
नेता, नकेपा माओवादी केन्द्र
अहिलेको राजनीतिकमा देखिएको संक्रमणकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका संघर्षबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका लागि सविधानसभा गठन भएको थियो । धेरै दाउपेंच र खेलका बावजुद सविधानसभाबाट नै सविधान निर्माण भयो तर नेपाली जनताको विरुद्धमा केही मुठीभरका खस अंहकारवादीहरु लागेका छन् । बनेको सविधान पनि कार्यान्वयन हुन नदिने भनेर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएकाहरुको अधिकार नदिने भनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । पहिलो सविधानसभाको चुनावमा पहिचान पक्षधर शक्तिको उपस्थिति दुई तिहाई थियो । तर, त्यसबाट सविधान बन्न सकेन र आज त्यसैको परिणाम नेपाली जनताले भोगि रहेका छन् । पहिलो सविधानसभा भन्दा दोस्रो सविधानसभामा हामी (पहिचान पक्षधर) बलियो भएर आउँछौ सोचेका थियौं तर हुन सकेन । तर म यहाँ त्यो कुरा पनि जानकारी गराई हालौ कि पहिचान पक्षधर शक्तिलाई आउन नदिनका लागि परिवर्तन विरोधी शक्तिहरुबाट ठूलै षड्यन्त्र भयो । आज त्यसको असर देखिन थालेको छ ।
पहिचान विरोधी शक्तिहरु बलियो भएको हो त अहिले ?
–पहिचान विरोधी शक्ति बलियो भएको त म मान्दिन तर दोस्रो सविधानसभाको परिणामले त्यहाँ उनीहरुको उपस्थिति देखाइएको छ । जुन षड्यन्त्रबाट दोस्रो सविधानसभाको चुनाव भयो त्यसबाट पहिचान विरोधी शक्तिले सविधानसभामा उपस्थिति देखाए नै । तर बलियो छैन, जनतालाई झुक्याएर आएका उनीहरु आफै समाप्त हुनेछ । पहिचान विरोधी शक्तिहरुलाई जवाफ दिन नेपाली जनता तयार भइसकेको छ ।
पहिचान विरोधी शक्ति एमाले हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
–एमाले पनि आन्दोलन गरेर आएकै शक्ति हो । जनताका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता सहित आएका पार्टी हुन् तर पछिल्लो समय जुन गतिविधि कृयाकलापहरु सो पार्टीले देखाएका छन्, त्यसले गर्दा सो पहिचान विरोधी हो कि पनि आशंकाहरु आउन थालेका छन् । नत्र भने सविधान निर्माणमा त एमालेको भूमिका पनि थियो नि तर अहिले कार्यान्वयनको बेलामा किन बखेडा झिक्न थालेका छन् । सविधानमा त्रुटी छ भने कुरा एमालेका नेताहरु पनि भन्दै आएका छन् तर त्यही त्रुटी सच्याउँन खोज्दा किन अवरोधक बनेको कुराले त्यो दलमाथि शंका उत्पन्न भएको छ ।
यस्तो किन गरिरहेको छ त ?
–एमाले पार्टीमा अहिले पहिचान विरोधी चिन्तकको बाहुल्यता देखिन्छ । जुन स्वार्थका लागि उनीहरुले राजनीतिक गरिरहेका थिए, आज ती स्वार्थ पूरा हुने अवस्था देखिरहेको छैन । राज्यसत्तामा उनीहरुले जसरी हालीमुहाली गरेर बसेका थिए, त्यो गुम्ने खतरा देखिएका हुनाले उनीहरु अहिले आँतिएर पहिचानवादी शक्तिका विरुद्ध गतिविधिहरु गर्न थालेका छन् ।
एमाले मधेशप्रति अलि बढी नै काडा देखिन्छ किन ?
–विगतको इतिहास हेर्ने हो भने मधेश उनीहरुका लागि मौजा (विर्ता) थियो अर्थात रजाई गर्ने ठाउँ थियो । जबसम्म मधेशी जनताले बुझेका थिएन, तबसम्म उनीहरुले त्यहाँ शासन गरे तर अहिले मधेशी जनताले सबै थाह पाइसकेका छन् । उनीहरुको मौजा भत्काउन थालेका छन् । उनीहरुको हालीमुहालीमा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । त्यही भएर मधेशप्रति त्यति काडा भएका होला । खाइपाइ आएका सेवा सुविधा खोसिएपछि जसलाई पनि समस्या हुन्छ नि । एमालेलाई त्यही पिडा भएको छ ।
एमालेले अहिले जे गर्न अवसर पाइरहेको छ, सविधान निर्माणको बेला माओवादी चुकेको कारण यस्तो अवसर पाएको हो जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
–पहिलो सविधानसभामा माओवादी चुकेकै हो, यसमा कुनै दुईमत छैन । यो मैले मात्र होइन, हाम्रो पार्टीले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । पहिलो सविधानसभामा म पनि थिए । त्यतिबेला कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा समिति थियो । यदि त्योबेला उहाँले एमाले जस्ता पहिचान विरोधी शक्तिलाई पेलेर भएपनि निर्णय गराएर सविधान बनाएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । अहिलेको भन्दा धेरै उत्कृष्ट सविधान निर्माण हुन्थ्यो त्यो बेला ।
माओवादी चुकेकै कारण अहिले यतिका मूल्य चुकाउनु परेको हो त ?
–प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका हाम्रा कमरेड प्रचण्डले सविधान कार्यान्वयनको पक्षमा अहिले बढी जोड दिनुभएको छ । दोस्रो सविधानसभामा पनि प्रचण्डले रिस्क नलिएको भए सविधान निर्माण हुने अवस्था थिएन । उहाँले आँट गरेपछि सविधान निर्माण भएको जग जाहेर छ । आफैले निर्माण गरेको कुनै वस्तुप्रति जसरी मोह हुन्छ, त्यसरी नै कमरेड प्रचण्डलाई यो सविधानप्रति मोह छ । र, उहाँले सविधान कार्यान्वयन गराउनमा लाग्नु भएको छ । सबैलाई समेटेर सबैको चित्त बुझ्ने गरि उहाँ अगाडि बढ्न खोज्नुभएको छ । सविधान निर्माणको बेला पनि उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले जे छ त्यस्तै सविधान निर्माण गर्दै जाउ पछि नमिलेको कुरा मिलाउँदै जाउँला । अहिले उहाँले त्यही कुरा मिलाउन खोज्नु भएको छ । तर एमालेले त्यसको विरोध गरेको छ ।
मधेशमा एमालेको जस्तो विरोध भएपनि मतको कुरा गर्ने हो भने मधेशवादी र माओवादी भन्दा बढी मत एमाले नै ल्याएको छ अनि त्यसको विरोध गर्नुको तुक के ?
–अब मधेशी जनता यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । जसलाई हामीले मत दिएर जिताऔं आज त्यही व्यक्तिले मधेशी जनताले पाउने अधिकारको विरुद्धमा छ भने अब आउने दिनमा त्यसमाथि विचार गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ ।
मधेशमा एमालेको जति विरोध भएपनि त्यसका कार्यकर्ता कतै टकसमकस भएका छैन किन त्यस्तो ?
–विगतको भन्दा अहिले मधेशी जनतामा चेतनास्तर बढेको छ । अब को ठिक, को बेठिक, त्यो छुट्याउन सक्ने क्षमता बनाइसकेका छन् । मतदान गर्ने बेलामा ती मधेशी जनता जसको अधिकार खोसिरहेको छ त्यसको बारेमा अवश्य विचार गर्नेछ भने मलाई लागि रहेको छ ।
मधेशी जनतामा यो चेतना यो चार महिनाको अवधिमा आएको हो कि पहिलादेखि थियो ?
–यो चेतनाको विकास पहिलादेखिको नै हो तर यो चार महिनामा अझै निखारिएर आयो । आउने दिनमा त्यसको जवाफ जनताले दिनेछ ।
अहिले तपाईहरु काठमाडौमा हुनुहुन्छ, एमालेका नेताहरु मधेशको गाउँगाउँ, घरघर पुगेको छ अनि कसरी भन्नुहुन्छ, मधेशी जनताले चुनावमा जवाफ दिन्छ ?
–हेर्नुस् मुख्य कुरा मुद्दा नै हो । मधेशी जनतासँग कुरा गर्ने मुद्दा नै छैन एमालेसँग । गाउँगाउँ घरघर गएर मधेशी जनतासँग उनीहरुले के कुरा गर्छन् । त्यहाँ गएर मधेशी जनतालाई ढाँट्ने काम गर्यो भने बेग्लै कुरा हो तर अब एमालेसँग कुनै मुद्दा छैन । गाउँगाउँ घरघर गएर यसपाली मधेशमा उनीहरुलाई केही फाइदा हुनेछैन । तपाईले याद गर्नुभएको होला, जहाँ जहाँ एमालेको कार्यक्रम भएको छ, त्यहाँ त्यहाँ विरोध भएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेश पस्न सक्नु भएको छैन । गएका नेताहरु पनि त्रासमा हुन्छन् । यस अवस्थामा मधेशी जनताको विश्वास जित्छन् भने मलाई लाग्दैन ।
जसरी मधेशवादी दलले एमालेलाई मधेशमा निषेध गरेको छ, त्यसरी नै तपाईहरुले पनि गर्नुहुन्छ कि ?
–हाम्रो त्यो नीति होइन । हामी निषेधको राजनीतिक गर्दैनौ । सबै पार्टीले आआफ्नो कार्यक्रम, आआफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामा जान पाउनु पर्छ । आआफ्नो कुरा राख्न पाउनु पर्छ अनि मात्र जनताले को सही, को गलत भनि रोज्न पाउँछ । तर एमालेले जुन गतिविधि संसद र संसद बाहिर गरिरहेका छन् त्यसको बारेमा हामीले जनतालाई जानकारी गराउँछौ । एमालेको भण्डाफोर गर्छौ । एमाले कसरी पहिचान विरोधी हो भने कुरा जनतालाई बुझाउँछौ ।
अब पार्टीको कुरा गरौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सविधान निर्माणको बेला जुन अडान लिनुभयो, त्यही कारणले पार्टी विभाजन भयो भन्नेहरु पनि छन् के यो साँच्चै हो त ?
–अंशगत रुपमा त्यो पनि हुनसक्छ तर समग्रमा त्यस्तो होइन । मुख्य रुपमा विचारमा नै फरक परेपछि पार्टी विभाजित भएको हो । जसरी मोहन वैद्यहरुले शान्ति प्रकृयामा आएर फस्यौं, फेरि जनयुद्धमै फर्कौ भन्नुभयो त्यसमा कुरा नमिलेपछि उहाँहरु अलग हुनुभयो । बाबुराम भट्टराई त सविाधन निर्माणको अन्तिमसम्म बस्नुभयो । उहाँले पनि भएको उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै जाने र देशमा देखिएको अन्योललाई चिर्दै जानुपर्ने पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो । तर पछिल्लो समये पार्टीले जुन सिद्धान्त र विचारले जनयुद्ध गर्यो ती सिद्धान्त र विचारमा नै फरकमत उहाँले देखाउन थाल्नुभयो । कम्युनिष्ट, वाम तथा माक्र्सवादलाई नै त्याग्न उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रचण्डले त्यसलाई मान्नुभएन र बाबुराम अलग हुनुभयो ।
जनताको बीचबाट आन्दोलन गरेर आएका माओवादी अहिले जनताबाट टाढिएको जस्तो देखिन्छ, पार्टीका सबै नेतालाई सिहदरवार वरिपरी नै देखिन्छ किन त्यस्तो ?
–तपाईले भनेको कुरा केही हदसम्म सत्य हो तर पूर्ण सत्य होइन । नौवटा घटक पार्टीमा मिलाएपछि सबैलाई मिलाएर लैजान एउटा चुनौति छँदै थियो । त्यसलाई मिलाउने काम भइरहेको छ । केन्द्रमा मिलिसकेको छ । प्रदेशमा मिलाउने काम भइरहेको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउन बाँकी छ त्यो पनि एक दुई दिनमा मिल्छ । तीन महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ, जनताको र घरघर पुग्नेछौ ।
पार्टी नेतृत्वप्रति पहिलादेखि नै पार्टीभित्रका मधेशी नेताहरु असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए, अहिले पनि त्यो कताकता देखिन्छ, पार्टीभित्र पद बाँडफाँड देखि लिएर अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा असमावेशी गरिएको देखिन्छ, यसको बारेमा मधेशी नेताहरुले केही गरिरहेका छन् ?
–यो सरकारमा हाम्रो पूर्ण बहुमत छैन । नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरु पनि छन् । मधेशी जनता र मधेशको कुरा जहाँसम्म छ । मधेशको मुलकुरो संघीयतामा नै लडाई परिरहेको छ । हामीले पार्टीभित्र पनि त्यो कुराहरु उठाई रहेका छौ । सविधान संशोधनका लागि पनि हामी पार्टीभित्र लडाई गरिरहेका छौ । हाम्रो पार्टीको पहलमा अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यो मधेशवादी दलको दवावले मात्र आएको होइन, हामी पनि पार्टीभित्र दवाव दिएका थियौं । हामी मधेशी नेताहरुले बेला बेलामा नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं । त्यसै कारणले आज संशोधन प्रस्तावका लागि पार्टीले यतिका अडान लिएका छन् । पार्टीभित्र पद बाँडफाँडको कुरा, राजनीतिक नियुक्तिको कुराका लागि पार्टीभित्र कुरा गरि नै रहेका छौ ।
भनिन्छ, पार्टीभित्रका मधेशी नेताहरु बीच नै मतमतान्तर छ, के यो सही हो ?
–ठूलो पार्टी भएपछि त्यहाँ विभिन्न प्रवृति र विभिन्न खालका व्यक्तिहरु हुन्छन्, त्यसले गर्दा अन्तरद्धन्द हुनु स्वभाविक कुरा हो । तर, कुनै निर्णायक अवस्थामा एक भएर जाने नै हुन्छ । हामी मधेशी नेताहरुले पनि पार्टीभित्र आफ्ना कुरा एकभएर राखेका छौ । मधेशको मुद्दा र एजेण्डामा हाम्रो केही मतान्तर छैन । पार्टीका लाइनलाई हामीले एकमतका साथ अगाडी बढाइरहेका छौ । काम गर्ने सिलसिलामा केही मतमतान्तर भएको होला त्यो बेग्लै कुरा हो ।